Hay'ada Socdaalka Sweden oo laga dalbaday joojinta Qoys la Musaafurinayo Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaHay’ada Socdaalka Sweden oo laga dalbaday joojinta Qoys la Musaafurinayo
Hay’ada Socdaalka Sweden oo laga dalbaday joojinta Qoys la Musaafurinayo
April 27, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Laanta Socdaalka Sweden ayaa go’aamisay, in loo masaafuriyo hooyo iyo caruurteeda gobolka Tigrey ee wadanka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Ethiopia , arintaas oo sare u qaaday aragtida bulshada Sweden ee baraha bulshada , sida lagu daabacay wargeyska Aftonbladet .
Frey Tsegai oo 38 jir ah ayaa Sweden timid sanadkii 2012 iyada oo magangalyo doon ah, si ay uga badbaado cadaadiska dowlada ay ku heyso iyada, maadaama ay qeyb ka aheyd dhaq dhaqaaq ka dhan ah maamulkii halkaasi ka jiray.
Tsegai waxay muujisay sida ay uga xun tahay go’aankan, iyadoo la yaabban sida ay ugu noolaan karto meel aan amaan u ahayn iyada iyo caruurteeda?
“Itoobiya hada amaan ma ahan, waxaad ka ogaan kartaa daawashada wararka. Waxaa laga yaabaa in meel walba la igu soo weeraro” ayay tiri.
Tsegay waxay ku noolayd caasimada Stockholm ilaa 2016, halkaas oo ay ku guuleysatay inay shaqo ka hesho, taas oo ay qabanaysay muddo ku dhow 3 sano.
Waxay aaminsantahay in caruurteeda ku barbaartay Iswiidhan oo luqadooda koowaad ay tahay Iswidhish, ay ku adkaan karto iyaga.
Tsegai waxay rajeyneysaa in hay’ada ay badali doonto go, aankeeda, marka loo fiiriyo waxa ay ku tilmaamtay dagaalada dhiiga ku daatay ee ka socda gobolkeeda, iyo qatarta halista ku ah iyada iyo caruurteeda hadii ay halkaas ku laabato.
Qoraal la soo dhigay baraha bulshada ayaa lagu codsaday olole lagu dalbanayo badbaadada Tsegai iyo carruurteeda, oo midkood ka ciyaaro naadiga kubbadda cagta ee maxalliga ah.
Qaar ka mid ah dadka caanka ah ee reer Iswiidhan, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ciyaartoydii kubbadda cagta ee ugu fiicnaa Iswiidhan, ayaa ka qayb qaatay ololahan.
Aad ayaan ugu mahad naqayaa, ayay tiri Tsegai, “dadku aad ayey ii taageereen